UNHCR မှ ချင်းဒုက္ခသည်များအား နိုင်ငံတကာ ကာကွယ်မှုဆက်လက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ UNHCR ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အပြည့်အစုံကို ဤနေရာတွင်ဖတ်နိုင်ရှုနိုင်ပါသည်။
အသနားခံလွှာ ပေးပို့သူများအားလုံး - အောင်မြင်ဂုဏ်ယူကြောင်း နှင့် ချင်းဒုက္ခသည် ကွန်မြူနီတီ အဖွဲအစည်းများ ကလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
သို့ပေမယ့် ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ရန် အနည်းငယ်ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ချင်းဒုက္ခသည်များကို ဒီမှာတည်ရှိနေတဲ့အခိုက်အတန့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအသိုင်းဝိုင်းများအကြား ပါဝင်အားဖြည့်ကူညီနိုင်ရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး သူတို့တွေရဲ့ ပြင်းပြသောလိုအင်ဆန္ဒ နှင့် အခက်အခဲများကို ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ရန် ဒီဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်ပေးပါ။
ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာများသည် မလေးရှား ချင်းတိုင်းရင်သားဒုက္ခသည်များ၏ ရင်ဖွင့် စကားစမြည်များကိုစုဆောင်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး
“သင်၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာဘယ်လိုအခြေအနေ ရောက်မယ်လို့ထင်ပါသလဲ”
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌ရှိသော ချင်းတိုင်းရင်သားဒုက္ခသည်များကို ဒုက္ခသည်အဖြစ် (လုံးဝ) ထည့်သွင်းစဉ်းစားတော့မည်မဟုတ်ပါ။
မှဤကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမူဝါဒပြောင်းလဲမှုကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရှိသော အချို့သော ၁၀၀,၀၀၀ ချင်းဒုက္ခသည်များနှင့် ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံထားသောသူများအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) ၏အဆိုအရ ချင်းပြည်နယ်သည် ငြိမ်းချမ်းပြီး ပြန်လည်နေထိုင်ရန် လုံခြုံကြောင်းပြောကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
ဤဆုံးဖြတ်ချက်သည် မတ်လ ၁၄ ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ပြုပြင် ကြေညာလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ချင်းတိုင်းရင်းသားများသည် မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း၊ အိန္ဒိယနှင့် ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျ နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်ရာနေရာများတွင် အများဆုံးနေထိုင်ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံလူများစုဖြစ်သော ဗမာစစ်အစိုးရများအကြား သမိုင်းတစ်လျှောက် မကြာခဏ ပဋိပက္ခများစွာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
အသက် 15 & 14
အသက် 17 & 13 & 14
အသက် 16 & 14
အသက် 14 & 12
အသက် 12 & 14
အသက် 13 & 15
အသက် 13 & 14
ကျွန်တော်တို့ မလေးရှားရောက်ရှိ ဒုက္ခသည်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး ဒီထက်သာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုအဖြေများ ရသင့်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ သည်တုံ့ပြန်မှုအဖြေသည် ဒုက္ခသည်များရဲ့ အိမ်မက်ဆန္ဒ နှင့် ရည်မှန်းချက်များ ပြန်လည်ရှင်သန်လာပြီး ကျွန်တော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအသိုင်းဝိုင်းကို များစွာအထောက်အမ ဆက်ပေးနိုင်တော့မည်။
သင် သဘောတူပါသလား? သဘောတူရင် သင့်နာမည်ကို အောက်က အသနားခံစာရေးရန်နေရာမှာ ထည့်သွင်းပြီး ပို့ရန် ကိုနှိပ်ပါ။ “ချင်း-နိုးဆော်ရေး” အစီအစဉ်မှ UNHCR ၊ မလေးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ မလေးရှား ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနများ ထံသို့ အီမေးလ် ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်သည်။
UNHCR ဌာနေကိုယ်စားလှယ် သောမတ်စ် အဲလ်ဘရီးခ်ျ (Thomas Albrecht),
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒါတို့ ဆာဖူဒင် အဗ်ဒူလာ (Datuk Saifuddin Abdullah),
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး တန် ဆရီ မုဟိုက်ဒင် ရာစင် (Tan Sri Muhyddin Yassin),
မလေးရှားရှိ ချင်းဒုက္ခသည်များ ကာကွယ်မှုရပ်ဆဲရေးအား ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးသည့်အတွက် UNHCR အပေါ် အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။
သို့ပေမယ့် မလေးရှားရှိဒုက္ခသည်များ အလုပ်ဝင်ရောက်ခွင့်, ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ အနည်းငယ်သာရရှိပြီး မတည်မငြိမ် ၊ မရေရာသောဘဝများနှင့် အသက်ရှင်ရန်ဆက်လက်ရုန်းကန်နေရပါတယ်။
ဒုက္ခသည်အများစုမှာ မလေးရှားနိုင်ငံ၌ နှစ်အတန်ကြာနေထိုင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ သူတို့တတွေဟာ ကျွန်တော်တိုို့လူ့အဖွဲ့အစည်းအကြားမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး၊ မိမိတို့ မိသားစုများအား ပျိုးထောင်ရင်း သာမန်ဘ၀ဖြင့် ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြပါသည်။
အထူးသဖြင့် ဒုက္ခသည်ကလေးများ၏ အကျပ်အတည်းများအား ဦးစားပေးတင်ပြလိုပါသည်၊ သူတို့တတွေသည် အခြေခံပညာရေးပင် မသင်ကြားရသည့်အပြင် မှန်းဆရန်ခက်ခဲသော အနာဂါတ်ကို ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။ ထို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဒီထက်ပို၍ လုပ်ဆောင်ပံ့ပိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဒီအတွက်ကြောင့် မလေးရှားရှိ ဒုက္ခသည်များရင်ဆိုင်နေရသောခက်ခဲသောအခြေအနေများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့ ကျွန်တော် ရေးသားတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ယခု လက်ရှိမူဝါဒ (ပေါ်လစီ) များသည် သူတို့အတွက် ဂုဏ်သရေရှိသောဘ၀ဖြင့် အသက်ရှင်နေထိုင်ရန် အခွင့်အလမ်း မပေးထားပါ။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များအား တောင်းဆိုအပ်ပါတယ် ။ ။
ကျေးဇူးပြု၍ ဒုက္ခသည်များ နှင့် ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားသူများအား တရားဝင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးပေးပါ။ဒါမှာသာ သူတို့အလုပ်ရှင်များရဲ့ ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းများ၊ အာဏာပိုင်များမှ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းများအား ကြောက်ရွံ့နေစရာမလိုဘဲ သူတို့တွေရဲ့မိသားစုများကို ထောက်ပံပေးနိုင်မှာဖြစ်သည်။ဒုက္ခသည်များ တရားဝင်အလုပ် လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်လျှင် မလေးရှားစီးပွားရေးကို တစ်ဖက်တစ်လှမ်းမှ အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ဒုက္ခသည် နှင့် ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူ ကလေးများအား အခြေခံပညာ သင်ယူနိုင်ရန် ခွင့်ပြုပေးပါ။ သို့မှသာ ၄င်းတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်များအား ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ကြိုပမ်းကောင်အထည်ဖော်ကြီးပြင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ဒုက္ခသည်များ နှင့် ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူများအား သင့်တင့်မျှတသည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ပေးပါ။
မလေးရှားလူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်လည်း ဒုက္ခသည်များနှင့် ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူများပေါင်းစပ်နေထိုင် နိုင်ရေး မူဘောင်သစ်များဖန်တီးပေးပါ။ အထူးသဖြင့် မလေးရှားနိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ခိုလှုံနေထိုင်ခဲ့ကြသူများ၊ နှစ်ကြာရှည်စွာ နေထိုင်လာသော ဒုက္ခသည်များအား အတင်းအကျပ် နှင်ထုတ် (ပြန်စေခြင်း) သည် လူသား မဆန်သောလုပ်ရပ်ဖြစ်ပြီး၊ ဒုက္ခသည်များ သူတို့ကိုယ်တိုင် သဘောတူခွင့်ပြုမှသာ စဉ်းစားစီစဉ်သင့်သည်။
“ချင်း-နိုးဆော်ရေး” အစီအစဉ်မှ ပေးပို့သည်။(chinup.my)
၂၀၁၀ ခုနှစ်က ကျွန်တော်မလေးရှားကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ၁၁ ရက်အကြာ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်မလေးရှားနိုင်ငံနယ်စပ်တွေအကြား တိတ်တဆိတ်ခရီးနှင်ခဲ့ရပါတယ်။ နေခင်းမှာပုန်းကွယ်ရပြီး ညဘက်မှာ လက်လျှောက်ရင်း ခရီးနင်ရပါတယ်။
အဲလိုနဲ့ပဲ ကျွန်တော် ဒုက္ခသည်တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွတော် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရမ်းကံကောင်းတဲ့ ဒုက္ခသည်တစ်ဦး ဖြစ်တယ်လို့ခံယူထားပါတယ်။ မလေးရှားမှာ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်မရှိပေမယ့်လည်း ဒုက္ခသည် ပညာသင်ထောက်ပံ့မှုနဲ့ ကျောင်းဆက်တက်နိုင်ခဲ့တဲ့ အခွင့်အရေးရရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာတော့ Limkokwing University of Creative Technology မှ Event Production နဲ့ ဒီပလိုမာဘွဲ့ ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော် နှစ်သက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကိုလည်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး နိုင်ငံခြားသားများအကူအညီနဲ့ DSLR ကင်မရာတစ်လုံးရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့ရဲ့ အခြားသူငယ်ချင်းတွေအတွက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတို တွေကိုလည်း စပြီးလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၂ဝနောက်ပိုင်း ကျွန်တော်ဒုက္ခသည်မဟုတ်နိုင်တော့တဲ့အကြောင်း ဂျွန်လ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ကြားခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်စိတ်သောကရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒုက္ခသည် ဘယ်တုန်းကမှမဖြစ်ချင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခု ဒုက္ခသည်ကာကွယ်မှုလည်း ဆုံးရှုံးရမှာဆိုတော့ ပိုပြီးတော့ စိတ်သောကရောက်ရပါတယ်။
ဒီချင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်ဟာ ကျွန်တော့အတွက် ကိုယ့်လူမျိုး-ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေ-ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ဘယ်လိုခံစားကြရသလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့တို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်း ကမ္ဘာကြီးကို ပြသရာရောက်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ဒုက္ခသည်တစ်ယောက် မဟုတ်တော့ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဒီလိုပဲရပ်နားရမယ်ဆိုရင်တောင် ကျွန်တော့်ရဲ့အသံကို အများပြည်သူသိအောင် ဖွင့်ပြပြီးမှပဲရပ်နားချင်ပါတယ်။
ဒုက္ခသည်များ၎င်းတို့၏ ဒုက္ခသည်ကာကွယ်မှုကို ဆုံးရှုံးရသောအခါ ဘာတွေဆက်ဖြစ်ပါသလဲ - “ရပ်နားခြင်း” ဆိုတာဘာလဲ ?
“ရပ်နားခြင်း” ဆိုတာဘာလဲ ?